एनसेलका २१ टावरमा विप्लवको आगजनी, कहाँ के भयो ? – SunkoshiNews
एनसेलका २१ टावरमा विप्लवको आगजनी, कहाँ के भयो ?
काठमाडौं : नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलका २१ टावरमा आगजनी गरेका छन्। बुधबार राति र बिहीबार बिहान भएका घटनामा विभिन्न जिल्लामा एनसेलका २१ टावरमा क्षति पुगेको हो। नेपाल टेलिकमको एउटा टावरमा आगजनी भएको छ।
नवलपुर, बेनी, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, तनहुँ, मोरङ, पोखरा, डोटी, गोरखा र भोजपुरमा एनसेलका टावरमा आगजनी भएको छ। कैलालीमा चारवटा टावरमा आगजनी भएको छ। नेपालगञ्जमा २ वटा टावरमा क्षति पुगेको छ। धादिङका ३ वटा टावरमा आगजनी भएको छ। यस्तै, सल्या र बैतडीमा १/१ वटा टावरमा आगजनी भएको छ। अर्घाखाँचीमा नेपाल टेलिकमको एउटा टावरमा क्षति पुगेको छ।
पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका १० मगरकोटमा रहेको एनसेल टावरमा गएराति आगजनी भएको छ। राति ११ बजे टावरमा एक समूहले आगजनी गरेको हो। आगजनीबाट जेनेटर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रवक्ता नायब उपरीक्षक अर्जुन रानाभाटले बताए। जुटको बोरामा मटितेल राखेर आगजनी गरिएको देखिएको छ।
आगजनीबाट टावरको तल्लो भागमा क्षति पुगेको छ। आगजनीपछि तत्कालन पुगेको प्रहरी र स्थानीयवासीले आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए। घटनास्थल जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट ३ किलोमिटर दूरीमा छ। आगजनी गर्ने समूहको पहिचान हुन नसके पनि विप्लव समूहका कार्यकर्ताले आगजनी गरेको आशंका प्रहरीको छ। घटनाबारे सोधपुछ गर्न दुई जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
बेनी नगरपालिका २ खबरास्थित एनसेलको टावरमा बुधबार राति आगलागी भएको छ। आगलागीबाट ब्याट्री र जेनेरेटरमा क्षति पुगेको छ। घटनास्थलमा पुगेका प्रहरी निरीक्षक रामप्रसाद पाण्डेले आगलागीबाट जेनेरेटर जलेको र ब्याट्रीमा क्षति पुगेको जानकारी दिए। प्राविधिक वा अन्य कारणले आगलागी भएको हो सो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए। बेनी बजार नजिकै रहेको खबरा क्षेत्रमा राति साढे १० बजेतिर बिष्फोटको आवाज सुनिएको थियो। घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा बिष्फोट भएको जस्तो नदेखिएको प्रहरी निरीक्षक पाण्डेले बताए।
ललितपुरको कोन्जोस्योम गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा रहेको एनसेल टावरमा अपरिचित ब्यक्तिको समूहले आगो लगाउने प्रयास गरेको छ। गएराति करिब साढे १० बजेतिर उनीहरूले टावरमा लगेको तारको मुठोमा आगो लगाएर भागेको महानगरीय प्रहरी परीसर जावलाखेलका प्रवक्ता नारायन चिमरीयाले जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त समूहले तारमा आगो लगाएर रातो र कालो तार जडित प्रेसर कुकर छाडेर हिँडेका थिए।
सिन्धुपाल्चोकमा पनि आगजनी
तनहुँमा सेवा अवरुद्ध
‘घटनाको प्रकृति हेर्दा ठूलै क्षति पुर्‍याउने योजना देखिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर क्षति सामान्य मात्रै भयो।’ घटनास्थलमा आगजनीका लागि पेट्रोल बोक्न प्रयोग गरिएको प्लाष्टिकको बोतल फेला परेको छ। बिहीबार बिहान ७ बजे स्थानीयले आगजनी गरिएको देखेर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। स्थानीय बालकृष्ण दाहालको जग्गा भाडामा लिएर एनसेल टावर राखिएको थियो।डीएसपी अधिकारीले आगजनी गर्नेको पहिचान हुन नसकेको र घटनाका बारेमा अनुसन्धान थालिएको जनाए।
बैतडीमा आगजनी र तोडफोड
बैतडीमा अज्ञात समूहले एनसेलका टावरमा आगजनी र तोडफोड गरेको छ। पुरचौंडी नगरपालिकाको १ उचापात्थर कुँडीधारमा रहेको एनसेलको टावरमा बुधबार राति अज्ञात समूहले आगजनी र तोडफोड गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
१२ भोल्टको ब्याट्रीमा तोडफोड गरी क्षति पुर्‍याएपछि पुरचौंडी क्षेत्रमा एनसेलको फोन सेवा अवरुद्ध भएको छ। यस्तै सोलारमा पातामा ढुंगाले हानेर क्षति पुर्‍याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक दीपक पातलीले जानकारी दिए। टावरमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आगजनी गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको उनले बताए।
सल्यान : सल्यानमा एनसेलको टावरमाथि आगजनी भएको छ। सल्यानको बागचौर नगरपालिका-५ शिवरथ जारुमारेमा रहेको एनसेल टावरमाथि बुधबार राति आगजनी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ।
आगजनीबाट टावरमा रहेको दुईवटा सोलारका प्यानलमध्ये एउटा पूर्णरुपमा क्षती भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी वीरेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए। टावरमा आगजनी गर्नेको पहिचान नखुलेको र घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी शाहीले बताए।
हालसम्म घटनाको कसैले जिम्मा नलिएको र कुनै पर्चा पनि नभेटिएकाले तत्काल केही भन्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
धादिङका तीनवटा एनसेल टावरमा आगजनी
अज्ञात समूहले धादिङका ३ ठाउँमा ३ वटा एनसेल टावरमा आगजनी गरेको छ। बुधबार राति छुट्टाछुटटै समयमा धादिङ छुट्टाछुट्टै ठाउँका टावरमा आगजनी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय धादिङले जानकारी दिएको छ।
सिद्धलेक गाउँपालिका- ६ कुम्पुरडाँडामा बुधबार राति साढे ११ बजेतिर आगजनी भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। आगजनीबाट टावरमा रहेको जेनेरेटर, व्याट्री, तार पूर्णरुपमा क्षति भएको छ। त्यस्तै, राति १ बजेको समयमा जिल्लाको धुनीबेसी नगरपालिका- ४ जीवनपुर र थाक्रे गाउँपालिका-३ जुरेथुममा रहेको टावरमा पनि आगजनी भएको छ। जीवनपुरमा जेनेरेटर, व्याट्री, तारमा पूर्ण क्षति भएको छ भने जुरेथुममा अब्टिकल केवल, तार र १२ वटा सोलार प्यानलमा क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) रुपक खड्काले जानकारी दिए।
आगलागी कसले र किन गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको खड्काले बताए। यसअघि पनि धादिङमा एनसेलको टावरमा आगजनी भएको र उक्त समयमा विप्लवले जिम्मा लिएकाले यस पटक पनि विप्लवले टावरमाथि आगजनी गराएको हुनसक्ने अनुमान गरेको उनले बताए।